Sindhu bikas bank limited(Sindhu bikas bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले यसअघि गणपुरक संख्या नपुगेका कारण स्थिति गरेको १० औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान पुनः तोकेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले स्थगित वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान पुनः तोकेको हो । जसअनुसार अब सभा यही माघ १७ गते सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेस्थित सिन्धुपाल्चोक उद्योग...
काठमाण्डौ । माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ फिचर ल्याएको छ । अब ट्विटरका प्रयोगकर्ताले सन्देशका साथमा इमोजी पनि पठाउन सक्नेछन्। कम्पनीले वेब, आईओएस तथा एन्ड्रोइडका सबै प्रयोगकर्ताका लागि सन्देशसँगै इमोजी पनि पठाउन सक्ने जनाएको छ । फेसबुकले म्यासेन्जरमार्फत सन् २०१७ मै सुरु गरेको यो फिचर अहिले आएर ट्विटरले...
दुई विकास बैंकसहित चार संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन, कुन–कुन, कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि चारवटा दुई विकास बैंकसहित चार वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य बुधबार समायोजन गरेको छ । नेप्सेले सिन्धु विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, समीट लघुवित्त र नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता सिन्धु विकास बैंकको...
दुई बैंक र एक फाइनान्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, कुन–कुन ?
काठमाण्डौ । दुई बैंक र एक फाइनान्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज मंगलबार अन्तिम मौका रहेको छ । साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि भोलि (बुधबार) देखि बुक क्लोज गर्न लागेका सिन्धु विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक र गुडविल फाइनान्स लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको छ । आजसम्म कायम सेयरधनीहरुमाध यी संस्थाका साधारणसभामा भाग लिन र...
सिन्धु विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते, यी हुन् मुख्य अजेन्डाहरु
काठमाण्डौ । लाभांश अनुमोदन मुख्य अजेन्डासहित सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो १० औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ । बैंकको हिजो सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यही पुस २९ गते सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेस्थित सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामा बैंकले गत...
सिन्धु विकास बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, कति छ बोनस सेयर र नगद ?
काठमाण्डौ । सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको आज मंगलबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चित मुनाफा र वितरणयोग्य अन्य कोषबाट हालसम्म कायम चुक्तापुँजीको कुल १२.०९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले बैंकको चुक्तापुँजी ५० करोड २७ हजार ३१६.७५...
सिन्धु विकास बैंकको चितवनमा शाखा
काठमाण्डौ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पहिलो विकास बैंकको रुपमा स्थापित सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले चितवन जिल्लाको विकासचोकमा बैंकको शाखा स्थापना गरेको छ । विकासचोक शाखाको चितवन उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...
काठमाण्डौ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पहिलो विकास बैंकको रुपमा स्थापित सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले मकवानपुरको पालुङ बजारमा आफ्नो शाखा स्थापना गरेको छ । पालुङ्ग शाखा मकवानपुर जिल्ला, थाहा नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्गबहादुर गोपालीले समुद्घाटन गर्नुभएको थियो । सोही अवसरमा बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...
सिन्धु बैंकको मेरो पहिलो बैंक खाता, ब्याज ८%
काठमाण्डौ । 'खोलौ बैंक खाता अभियान–२०७६' अन्तर्गत बैंकिङ्ग पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउन सिन्धु विकास बैंकले ८ प्रतिशतको उच्च ब्याजदरसहित ग्राहकका लागि “मेरो पहिलो बैंक खाता” भन्ने नयाँ बचत खाता संचालनमा ल्याई एक महिने अभियान संचालन गरेको छ । यो बचत खाता हालसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय...
सिन्धु विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न, के के पारित भयो ?
काठमाण्डौ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पहिलो विकास बैंकको रुपमा स्थापित सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले २०७५ पौष २८ गते आफ्नो नवौं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभाले आ.ब. ०७४/०७५ को बार्षिक प्रतिवेदन लगाएत बिभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । साधारण सभाबाट बैंकको संस्थापक शेयरधनि समूह तर्फको संचालकहरुमा राजेन्द्रकुमार...
सिन्धु बैंक र प्रभू इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता
काठमाण्डौ । सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड र प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशप्रसाद जोशी र इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चित बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौताबाट सिन्धु बिकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले...
सिन्धु बैंक र नेपाल लाइफबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाण्डौ । सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड र नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशप्रसाद जोशी र इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले हस्ताक्षर गरे। यो सम्झौताबाट सिन्धु बिकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले नेपाल...
सिन्धु बैंकलाई बोनस सेयर वितरणको स्वीकृति
काठमाण्डौ । सिन्धु विकास बैंकले प्रस्ताव गरेको बोनस दर नेपाल राष्ट्रबैंकले स्वीकृत गरेको छ । बैंकको जेठ ३१ गते सम्पन्न २१८ औं बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ५.९५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३१३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी ४७ करोड १९ लाख रुपैयाँ...
सेवा बिस्तारमा सिन्धु बैंक पनि आक्रामक
काठमाण्डौ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पहिलो विकास बैंकको रुपमा स्थापित सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले दोलखा जिल्लाको सिङ्गटी बजारमा बैंकको शाखा तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिलढुङ्गामा सीमित बैंकिङ्ग कार्यालय स्थापना गरेको छ । सिङ्गटी शाखा दोलखा जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुन्दर कार्की र बिगु गाउँपालीकाका अध्यक्ष युधिष्ठीर...
विश्वभर दैनिक कोरोना संक्रमित फेला पर्ने संख्यामा नयाँ रेकर्ड